दुखद् खबर : नेपाली सुरक्षा गार्ड बोकेको गाडीमा आत्मघाती विष्फोट, १४ को मृत्यु | Jukson
नेपाल आइडल : विक्रम बरालको…
​पोखरा महानगरले विहिबारबाट अव्यवस्थित तार…
नियम नमान्ने ट्याक्सी चालकको अनुमतिपत्र…
ओली इतिहासकै बलियो प्रधानमन्त्री :…
हर्न बजाउने दुईसय चालक कारवाहीमा
फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको सम्बोधन, तलब वृद्धि…
पोखरा महानगरमा इजलास सुरु
माछापुच्छ्रे स्वास्थ्य चौकिमा रोटरीद्धारा यूरोगार्ड र डिस्पेन्सर सहयोग
दुखद् खबर : नेपाली सुरक्षा गार्ड बोकेको गाडीमा आत्मघाती विष्फोट, १४ को मृत्यु
काबुल, असार ६ . अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहरमा सोमबार विहान भएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा अझ बढीको मृत्यु भएको हुनसक्ने र आठ जना घाइते भएको पत्ता लागेको छ। नेपाली ‘सेक्युरिटी कन्ट्र्याक्टर’ (करारका सुरक्षाकर्मी) सवार पहेँलो रंगको मिनी बसमा यो आक्रमण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सहरको बनाइ जिल्लामा पर्ने घटनास्थललाई यतिबेला प्रहरी र एम्बुलेन्सले घेरेको छ। प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार थुप्रै मृतकको शव देखिएको छ भने कम्तीमा दुई जना घाइतेलाई बसबाट निकालेर एम्बुलेन्समा राखिएको छ।
आन्तरिक मामिलासम्बन्धि मन्त्रालयका प्रवक्ता सेदिक सिद्दिकीले १४ जना मृतको पुष्टि गर्दै प्रहरीले उनीहरुको पहिचान गरिरहेको बताएका छन्। काबुल प्रहरीका प्रमुख अब्दुल रहमान रहिमीले मृतकहरूमा अफगानिस्तान र नेपाल दुबै मुलुकका करारमा राखिएका सुरक्षाकर्मीहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ती सुरक्षाकर्मीहरू राखिएको भवनको कम्पाउन्डमा बसेको आक्रमणकारीले बस ब्यस्त सडकमा निस्कनेबित्तिकै आक्रमणको तारो बनाएको रहिमीले उल्लेख गरेका छन्। बसमा सवारसहित नजिकैको बजारका केहि मानिस पनि घाइते हुनपुगेको उनले जनाए।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महत्वपूर्ण चाड रमदान चलिरहेको बेला भएको यो आक्रमणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएका छैनन्। यसैबीच, अफगानिस्तानस्थित वासिंगटन पोस्टका पत्रकार सैयद सलाहुद्दिनले ट्वीटमार्फत् यो घटनाको जिम्मेवारी भर्खरै तालिवानले लिएको बताएका छन्।
गत महिना अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा परेर तालिवानका नेता मुल्लाह अख्तर मन्सुरको मृत्यु भएयता अफगानिस्तानमा जारी अशान्तिकै यो पछिल्लो रुप हो। मन्सुरको मृत्युयता यो तेस्रो ठूलो आक्रमण हो।
काबुलको आत्मघाती आक्रमणमा मृत्यु हुने सबै १४ जना नेपाली भएको पुष्टी
काबुलमा मारिएका १२ नेपालीको पहिचान खुल्यो (नामसहित)
Anuta Gurung PAATE-2
BISMITA bHANDARI USA
प्रेस युनियनमा सामूहिक राजीनामा
तुरतुरेको पहिरो निरीक्षण
यस्तो तलबभत्ता र सुविधा पाउँछन्, नेपाली राजदूतले
भूतपुर्व खेलाडी मञ्चद्धारा मञ्चका आजिवन सदस्यहरुलाई सम्मान, पत्रकार दौड हुने
विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ‘ब्ल्याक बक्स’ का रेकर्ड